घरको फोहोरलाई कसरी गर्ने ब्यवस्थापन – Enepal Khabar
१५ अक्टोवर, कोपनहेगन ।
घरबाट निस्कने फोहोरलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा एक छलफल भएको छ । डेन्मार्कको ओडेन्सेमा “घरघरमा फोहरबाट जैवीक/तरल मल बनाई करेसा बारी/खेती गर्ने” बिषयको प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी सेमिनार भएको हो ।
नेपाली राजदूतावास डेनमार्कको आयोजना र ओडेन्सेमा रहेका नेपालीको सक्रियतामा अक्टोवर १३ तारिखका दिनमा सो बिषयमा कार्यक्रम भएको हो । साथै दुताबासले प्रदान गर्ने सेवाहरु राहदानी, कन्सुलर लगायतको विषयमा पनि अन्तरक्रिया भयो ।
राजदुत युबनाथ लम्सालले डेनमार्कको यातायात व्यबस्था, कर प्रणाली, पारदर्शिता, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रमा रहेको प्रविधिलाई नेपालमा ट्रान्सफर गर्न सके त्यसले नेपालको विकासमा सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
यस्ता किसिमका योजना तथा कार्यक्रम नेपाल लैजानको लागि आफ्नो ठाउबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाए ।
डा. भानु पोखरेलले डेनमार्कमा फोहोर ब्यबस्थापन कसरी गरिन्छ र काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने जानकारी दिदै घरबाट निस्कने प्रांगारिक फोहरलाई घरमै कसरी मोहोर बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
राजदुताबासका उपनियोग प्रमुख डोरनाथ अर्यालले यस्ता योजनालाई प्रयोगमा ल्याउन सरकारी अथवा व्यक्तिगत तवरबाट चाल्नुपर्ने कदमहरुको बारेमा चर्चा गरे ।
दिनेश चन्द्र पन्तले प्रांगारिक फोहोर व्यवस्थापनमा नगरपालिकाको भूमिकाका बारेमा जानकारी दिए । गैर आवासिय नेपाली सङ्घ डेनमार्कका अध्यक्ष यमलाल सुवेदीले यस्ता योजना नेपाल लैजान सबैको पहल हुनुपर्नेमा जोड दिए । सङ्घका उपाध्यक्ष डा. नविन अर्यालले फोहोर व्यवस्थापनमा लामो समय देखि काम गर्दै आएको र यदि कसैले यस क्षेत्रमा काम गर्न खोजेमा आफु सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।
कार्यक्रमका सहभागी शैलेश राजकर्णिकाले यस्ता किसिमका कार्यक्रम समय समयमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । अर्का सहभागी यम अर्यालले बिदेशमा रहेका विज्ञहरुको सीप र ज्ञानलाई नेपालको विकासका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताए ।
३१ आश्विन २०७५, बुधबार १५:०७ मा प्रकाशित